Akụkọ - ịkụda maka ịkụcha ihe
slewing agba maka excavator
Onye na-egwupụta ihe bụ nnukwu ihe eji arụ ọrụ na diesel iji mee ka ala na ịwụ ahụ nwee ike mepee olulu, oghere na ntọala. Ọ bụ mkpokọta nke nnukwu ebe nrụọrụ ihe owuwu.
Emepụtara ndị na-egwupụta akụ ha ụzọ dị iche iche; ya mere, ha bia di iche iche. Typesdị excavator ndị a na-ahụkarị bụ ndị na-agagharị agagharị, ndị na-agba draịva, ndị na-egwupụta mmiri, ndị na-agagharị agagharị, na ndị na-egwupụta ihe ruo ogologo oge.
Ndị na-egwupụta ihe na-eji ọtụtụ ụdị hydraulic dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche. Na mgbakwunye na bọket, ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-agụnye auger, onye na-agbaji, grapple, auger, oriọna, na di na nwunye ngwa ngwa, akụkụ kachasị mbubata bụ ịmị ọnụ.
Onye na-egwupụta ihe nwere ike ịtụgharị aka ekpe na aka nri n'oge ọrụ, ọ nweghịkwa ike ime na-enweghị ịkụ ọkụ. Bearinggbacha ịkụ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ịkụ ọkụ. A na-ejikarị excavator slewing bear iji kwado uka nke ụgbọ ala dị elu ma na-ebu ibu ọrụ.
Ihe na-egbu egbu nke excavator na-agbakwụnye ụdị ụdị nke dị n'ime otu ụzọ anọ na-egbu egbu mgbe ị na-akpọtụrụ bọl ahụ, ma na-agbatị eze
Post oge: Jul-22-2020